Nagarik Shukrabar - दसैँमा कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ?
बुधबार, ०२ साउन २०७५, ०६ : २५
आइतबार, ०८ असोज २०७४, १२ : २७ | शुक्रवार
दसैँमा त हाम्रो त्यति खर्च हुँदैन किनभने हामीले दसैँभन्दा पनि ठूलो चाडका रुपमा ल्होसार मनाउँछौँ । त्यसबेला चाहिँ बढी पैसा खर्च हुन्छ । यो दसैँमा पनि नहुँदा पनि १०–२० त हजार खर्च भइहाल्छ ।
दसैँमा बूढाको घर गइँदैन । माइती गयो भने मात्र खर्च हुने हो । त्यति खर्च गर्ने चलन छैन । बढीमा १०–१५ हजार मात्र छुट्याएको छ । बच्चाहरुलाई लुगा किनिदिने बेलामा मात्र खर्च हुन्छ । दसैँ भनेकै बच्चाहरुको त हो !
दसैँमा घर नगएको २–३ वर्ष भइसक्यो । पहिला घर जाने बेलामा त २०–३० हजार खर्च हुन्थ्यो तर अहिले त बढी लाग्छ । यहीँ मात्र दसैँ मनाउँदा पनि अचेल १५–२० हजारले हाम्रो चार जनाको परिवारलाई पुग्दैन ।
म त आफैँले कमाउन थालेको ६ महिना जति भयो । पहिला त केही किनेर लाने गरेको छैन उल्टा आमाले किनिदिनुहुन्थ्यो तर यसपालिको दशैँमा घर जाने बेला केही किनेर लाने सोच । म यो दसैँमा बुबाआमालाई लुगा किन्ने सोचमा छु । म १०–१५ हजार खर्च हुन्छ ।
दसैँमा त नगर्ने खर्चभन्दा पनि २०–२५ हजार त हुन्छ । घर नै टाढा छ । गाडी भाडा नै लाग्छ जानलाई मात्र १८ सय । अनि मैले चाहीँ दिदीभान्जालाई लुगा किनिदिन्छु यसपालिको दसैँमा । मलाई पनि एकजोेर किन्ने हो ।
हम्रो त दसैँमा नयाँ लुगा लाउने चलन छ । त्यसैले लुगा किन्न काठमाडौंको मल घुम्दै हो । हाम्रो त केटाहरुको लुगा नै महँगो हुन्छ । हामीलाई मात्र लुगा किन्नलाई १०–१५ हजार लाग्छ । अनि आफूले गरेको एक महिनाको तलब त जान्छ ।
दसैँमा त हाम्रो कम्तिमा पनि २०–२५ हजार जान्छ किनभने हामी ४ जना परिवार छौँ सबैलाई एक–एक जोर लुगा त किन्नै पर्यो । त्यसमा र अरु खानेकुरामा खर्च हुने गर्छ ।
हाम्रो त दसैँमा ५०–६० हजार खर्च हुन्छ । गाउँमा बुबाआमा, छोराछोरीलाई लुगा किनिदिने गरेको छु । हामी काठमाडौँमा ५ जना छौँ उता उता बुबाआमा हुनुहुन्छ । हामीले दसैँमा दुवैको पैसा खर्च गर्ने गरेका छौँ ।
दसैँमा अब कति खर्च लाग्छ भन्ने । हामी ४ जना छौँ परिवार । घर जान एकजनाकै लाग्छ, हजार १२ सय । अनि हामीले सामान चाहिँ कहिले किनेर लग्ने गरेको छु । कहिलेकाही पैसा नै पुग्दैन । त्यति बेला किन्दैनौँ, दसैँमा ३० हजार त खर्च हुन्छ नै !
दसैँमा खर्च कति हुन्छ भन्ने ? हाम्रो त गाउँ नै जानुपर्दैन । मैले त अहिलेसम्म घर खर्च भनेर छुट्याउने गरेको छैन । म आफैँलाई मात्र खर्च गर्ने हो । दसैँमा मेरो १० हजार जति खर्च हुन्छ । यो त एस्सोउस्सो गर्ने खर्च मात्र हो, अरु त छुट्टै हुन्छ नि !
आजकाल त महँगीको जमाना छ । खर्च कति हुन्छ त भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो चाहिँ गरिसकेपछि थाहा हुन्छ । अहिले त मैले किन्न सुरु गरेकै छैन । किन्नलाई आएको छु । कति खर्च हुन्छ भनेर भन्नुपर्दा २० हजार त हुन्छ होला ! यो फेरि फुटपात होइन, मल हो ।
म त विद्यार्थी हो । काम गरेको छैन । सबै आमाबुबाले किनिदिनु हुन्छ । आज साथीहरुसँग किन्ने भनेर ५ हजार ल्याएको छ । त्यही हो मेरो दशैँको खर्च । दशमीको दिन पाउने दक्षिणा त बेग्लै भइहाल्यो नि !
दसैँमा कति पैसा खर्च हुन्छ त्यो त थाहा भएन । मलाई आमाले लुगा किनिदिनुहुन्छ । मलाई दसैँमा छुट्टै खर्च भनेर १ हजार पाउँदै आएको छु । मलाई लाग्छ, मेरो दसैँ खर्च यही नै हो ।
दसैँमा पहिला भए ५० देखि १ लाखको खर्च हुन्थ्यो तर अहिले त ३०–४० हजार मात्र खर्च हुन्छ । मैले गर्नुपर्ने दुवै छोरा विदेश गइहाले । म र मेरी बूढी दुई जना मात्रै छौँ । खर्च गराउने कोही नभएकाले हाम्रो खर्च धेरै बचेको छ ।
यो दसैँका लागि भनेर मैले त २० हजार राखेको छु । त्यसैले बबाल दसैँ मनाउने हो । मलाई त दसैँ भन्नेबित्तिकै साथीभाइ, भेटघाट भन्ने लाग्छ । साथीभाइ भेटेपछि रमाइलो हुने त हो नि !
अहिले त दसैँ दसैँजस्तै लाग्दैन । मलाई त दसैँमा केही गरुँजस्तो लाग्दैन । अहिले त खानेकुराको किनमेल गर्ने हो । आफ्नो त उमेर गइहाल्यो । नयाँ लुगा किने नि नकिने नि केही फरक पर्दैन । सालाखालामा भन्नुपर्दा २० हजार त हुन्छ ।
म त भर्खर विदेशबाट फर्केको हो । त्यसैले घर जानको लागि किनमेल गर्दैछु । यसपालि सबैलाई लुगा किनेर लान्छु । यो दसैँ एकदम राम्रो बनाउने सोचमा छु । यसपालि मेरो धेरै खर्च हुन्छ । यो दसैँमा सायद ८० हजार जति खर्च हुन्छ होला ।
दसैँमा खर्च ३० हजारसम्म जान्छ । त्यो भन्दा नि बढी जान नि सक्छ । कम पनि हुन सक्छ । सबै बच्चाहरुलाई दसैँको लागि सामान किन्न आएका छौँ । अब हेरौँ, कति खर्च हुन्छ आज ।
दसैँमा म त धेरै खर्च गर्दिनँ किनभने तिहारमा पनि खर्च गर्नुपर्छ । दिदी बहिनीलाई दिनुपर्छ । त्यसैले मेरो त दसैँमा १५ हजार खर्च भए तिहारमा त २५ हजार हुन्छ । मलाई दसैँभन्दा पनि तिहार रमाइलो लाग्छ ।
दसैँमा मेरो त ठीकै खर्च हुन्छ । आफ्नो बगली हेरेर खर्च गरिन्छ । धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन । मलार्इृ त कहिलेकाहीँ त दसैँ दसाजस्तो लाग्छ । पैसा हुँदैन । भएको बेला सबैलाई केही न केही किनिदिने गर्छु ।
दसैँमा त कस्को खल्तीमा पैसा त उसैले खर्च गर्छ । यसपालि साथीहरुसँग तास खेल्ने र बियर खाने मूड छ । यसमा त कहिले कति खर्च कहाँ हुन्छ भन्न सकिन्न । कहिलेकाहीँ त एकदिनमै २–३ कार्टुन बियर जान्छ । फेरि अरु त हिसाब बाँकी नै हुन्छ ।
यो दसैँमा केही खर्च गर्दिनँ । मैले मनाउनु हुँदैन । त्यसैले अरु बेलाभन्दा यसपालि खर्च हुँदैन भन्छु म ।
दसैँमा मेरो खर्च घुुम्न जाँदा धेरै हुने हो । यसपालि दसैँमा पोखरा जाने सोचमा छु । साथीहरुसँग जाने हुनाले त्यसैमा पैसा खर्च हुन्छ । मेरो भागको खर्च १० हजार जति होला भन्ने सोचेको छु ।
मेरो त दसैँको खर्च त्यति गर्दिनँ किनभने आज मात्र खर्च गरेर के गर्ने ? भोलिको पनि सोच्नुप¥यो नि ! त्यसैले म दसैँ भनेर छुट्टै खर्च गर्दिनँ । म नियमित रुपमा खर्च जसरी गर्ने हो, त्यसरी नै गर्छु ।